Yaa’iin Dhaabbilee Amantaa Ityoophiyaa sagantaa kadhataa biyyoolessaa ifoomse - ETHIOPIANS TODAY
Yaa’iin Dhaabbilee Amantaa Ityoophiyaa sagantaa kadhataa biyyoolessaa ifoomsuu beeksiseera.
Sagantaan kadhatichaa ilaalchisee dhaabbile miidiyaaf ibsa laateera.
Sagantichi Eebila 7 hanga 9 guyyaa keessaa sa’atii 9tti yaa’ii dhaabbilee amantaa Ityoophiyaatti abbootiin amantaa olaanoon ifatti ni eegalchiisuun eegama.
Eebila 8 irra egaalee walitti fufiinsaan guyyoota 7f kan turuu kadhatichi dhaabbilee miidiyaa raadiyoo fi televizhiiniitiin akka darbu ragaan Yaa’iin dhaabbilee amantaa Ityoophiyaarra argamee ni muul’dhisa.
Ityoophiyaa fi Emmireetoonni Arabaa Gamtoomanii carraa hojii uumuurratti marii gaggeessan